u-Du Plessis uthemba sengathi isimilo sika-Elgar singagqugquzela abanye abashayayo
Ukapteni wama-Standard Bank Proteas, u-Faf du Plessis, uthi abashayayo ngathi bangathola ukugqugquzelwa u-Dean Elgar owadlala i-innings yokulwa njengoba bahlulwa ngama-runs angu-239 bedlala ne-England kumdlalo we-Test wesithathu e-The Oval ngoMsombuluko. U-Elgar washaywa kaningi esandleni iqembu elaliphosa, okwagqamisa umsebenzi omubi emdlalweni.
Ikhulu lika-Elgar elokuqala kwi-series ye-South Africa, futhi kuzonika iqembu elihlulekayo ukushaya ithemba lokuthi kungafezeka, nokho isimo sinenselelo kanye nabaphosayo be-England abahle.
“u-Dean ususe imfene yamakhulu emhlani yethu,” kusho u-Du Plessis emuva komdlalo. “Ngithemba ukuthi abashayayo bazobuya kahle ngoba usikhombisile ukuthi kumele ushaye kanjani kwikhilikithi yama-Test. Akukaze kubelula, kufanele uzinikele, uthathe incindezi, noma izinto zizimbi njengoba sibone u-Dean. Uma udlula lapho uzothola ithuba lokuthola ama-runs futhi ufake iqembu ngaphansi kwencindezi, ukwenzile lokho namhlanje. Kuhle uma ubheka ngakwiqembu ukuthi ukwenzile namhlanje futhi sizozama ukwenza isiqiniseko ukuthi singenza lokhu akwenza kwi-Test yokugcina.”
u-Du Plessis uyavuma ukuthi iqembu lakhe belingemuva kwebhola lesishagalombili kusukela osukwini lokuqala emuva kokulahlekelwa u-Vernon Philander, kodwa wabala abambalwa abangaletha okuhle kwi-Test yesine ezoqala e-Old Trafford e-Manchester ngoLwesihlanu.
“Ukunokuhle okumbalwa engakuthatha emdlalweni odlulile,” kusho u-Du Plessis. “Indlela u-KG (Rabada) aphose ngayo izolo yilo-Rabada engimaziyo. Usephosa kahle futhi ukungashintshi kwakhe kubalulekile kithina uma sihlasela. Bekukuhle ukuphosa kwa-KG kimina no-Morne (Morkel), obedlala ngokufana i-series yonke. Uma kubhekwa ngasekuphoseni siyazi ukuthi singaletha inselelo ekushayeni kwabo, kunokudlala okumbalwa kanye nokuhluleka futhi ngelinye ilanga lokho bekungagwemeka.”
“Ngasekushayeni, kube u-Dean futhi indlela agqhama ngayo kulomdlalo. Wadlala indima enkulu ngalelakhulu, kwakubalulekile kuyena, kungabakuhle uma angathatha le-form emdlalweni olandelayo.”
u-Elgar, ohamba phambili ngama-runs kuma-Proteas kule-series nama-runs angu-286 okubalwa khona o-50 ababili kanye nekhulu elilodwa, uthi inselelo yokuvula umdlalo, kanye nokulimala, kuyamugqugquzela ukuthiaphumelele.
“Bekumangalisa, ingakho udlala umdlalo,” u-Elgar ekhuluma ngempi yakhe no-Ben Stokes ngasekugcineni kosuku lwesine. “Njengengane wawukubona kumabonakude futhi uzwe indlela ababukeli abacula ngayo, awutholi usuku olufana njengayizolo. Kumele uzame ukubeke ngakuwena, uzame ukugqugquzeleka ukuthi ubenenkani enkulu futhi umpintshe kwizinhlelo zakho zomdlalo. Ungakusebenzisa emdlalweni wakho kodwa yinto enkulu ukudlala nomdlali omkhulu womdlalo okuzela ngamandla, impi enkulu.”
u- Bavuma on esibindi ubheke umsebenzi kuphela - Zulu translation Bavuma no-Morkel bavimba i-follow on ngaphambi kokuthi i-England iqhubekele phambili u-Roland-Jones no-Stokes bahole i-England Singawenza umthelela - u-Rabada u-Cook ugcina ama-seamer ama-Proteas kude ngosuku oluthathanayo -Du Plessis uyakhuza ngokukhululeka u-Amla uthemba ukuthi kungaba nomunye umlingo eqenjini alikhonzile u-Rabada obuyayo ‘ulindele ukudlala’ iCSA incoma amaMomentum Proteas ngomqhudelwano wawo wendebe yomhlaba ongakhohlakali AmaProteas ashaya i-England, abeka udaba olukhulu nge-series Abaphosela amaProteas balungisela ukulwa okunzima